December 2017 – TPEC
BOOSAASO, Puntland- Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland ee T-PEC, ayaa shir wada-tashi ah oo ku saabsan hirgalinta nidaamka dimuqraadiyadda Puntland, ku qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Shirkan oo uu soo qaban-qaabiyay Guddigu islamarkaana ka dhacay hotel Gacayte, waxaa kasoo qayb galay Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Bari, Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Puntland, ku-xigeenkiisa, xubno katirsan …
Guddiga doorashooyinka Puntland oo shir ku qabtay Boosaaso [Sawirro] Read More »
Wafdi uu hogaaminayo Guddoomiyaha TPEC oo dib ugu laabtay Garoowe
GAROWE (TPEC)- Wafdi uu hogaaminayo Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Puntland ee TPEC, Cabdiraxmaan Diiriye Samatar, ayaa dib ugusoo laabtay magaalo madaxda Puntland ee Garoowe, kadib safar shaqo oo muddo dhowr cisho ah ugu maqnaayeen caasimadda dalka ee Muqdisho. Xubnahan katirsan TPEC, ayaa casumaad ka helay Guddiga Doorashooyina Heer Federaal, waxayna kawada hadlayeen arrimo ku aadan sidii …
Wafdi uu hogaaminayo Guddoomiyaha TPEC oo dib ugu laabtay Garoowe Read More »
Daawo: Xafladda Xiritaanka Kulanka Hormarinta Istaraatiijiyadda TPEC
Waxaa maanta si habsami leh usoo gaba-gaboobay shir u socday Guddiga doorashooyinka Puntland ee TPEC, kaasoo looga hadlayay hormarinta Istaraatiijiyadda Guddiga.
GAROWE (TPEC)- Waxaa maanta magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland lagusoo gaba-gabeeyay kulan qaatay Afar cisho oo u socday guddiga Doorashooyinka Puntland ee TPEC, kaasoo looga hadlayay hormarinta Istaraatiijiyadda guddigaas oo soo bilowday bil ka hor. Kulankan oo ay kasoo qayb galeen xubno katirsan TPEC, khuburo caalami ah iyo qaar kamid ah bulshada rayidka ah ayaa …
Shirkii Hormarinta Istaraatiijiyada Guddiga TPEC oo soo xirmay [SAWIRRO] Read More »
Daawo kulanka TPEC uga furmay Garoowe
GAROWE, TPEC- Waxaa maanta magaalada Garoowe ka furmay shir lagu falanqaynayay qorshaha Istaraatiijiyadda Guddiga Doorashooyinka Puntland.
Kulanka Afar maalmood soconaya oo TPEC uga furmay Garoowe [Sawirro]
GAROWE, TPEC- Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland, ayaa maanta magaalada Garoowe ku qabtay kulan socon doona Afar cisho oo looga hadli doono Istaraatiijiyadda Guddigan uu ku shaqayn doono saddexda sano ee soo socota, kaasoo ay gacanta ku hayaan Khubaro caalami ah iyo la taliyaasha sharciga ee Guddiga. Shirkan oo ay isugu yimaadeen xubno ka …
Kulanka Afar maalmood soconaya oo TPEC uga furmay Garoowe [Sawirro] Read More »